मिस इको इन्टरनेशनल २०२१ मा भाग लीन अनुश्मा रायमाझी इजिप्ट जाँदै
फाल्गुन ११, २०७७
२१२ पटक पढिएको
धरान : इजिप्टमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय सौन्दर्य प्रतियोगिता ‘मिस इको इन्टरनेशनल २०२१’मा नेपालको प्रतिनिधित्व अनुश्मा रायमाझीले गर्ने भएकी छन् ।
मिस इकोका लागि आधिकार प्राप्त नेपाली संस्था ग्रिन आर्ट मिडियाले उक्त प्रतियोगितामा नेपाली प्रतिनिधिको रूपमा रायमाझीलाई पठाउन लागेको हो ।
१८ मार्चदेखि ५ जुनसम्म आयोजना हुने उक्त प्रतियोगीताका लागि रायमाझी ‘मिस इको इन्टरनेशनल नेपाल २०२०’को विजेता भएपछि छानिएकी हुन् । ६० बढी देशका इको सुन्दरीहरूको सहभागिता रहने प्रतियोगीताका लागि रायमाझी नेपालबाट एक्लो सहभागी हुनेछिन् ।
२१ वर्षीय रायमाझी प्रतियोगीताका लागि मार्चको पहिलो साता इजिप्ट जाने तयारीमा छिन् । कल्चरल ड्रेस र देशमा रहेको सांस्कृतिक र पर्यटकीय स्थानको प्रतियोगितामा आफूले प्रचार गर्ने उनले बताइन् ।
मिस इको इन्टरनेशनलको रायमाझी नेपालको छैटौं सहभागी हुन् । यसअघि प्रतियोगिता प्रिन्शा श्रेष्ठ, नग्मा श्रेष्ठ, रोनाली अमात्य, मुना गौचनले, मौनता लामा सहभागिता जनाएका थिए ।
‘मिस इको इन्टरनेशनल’ एक प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय सुन्दरी प्रतियोगिता हो । जसको एल.टी.सि.पि. अर्गनाईजेशनले ब्युटी फर इको’ जागृत गर्दै टुरिजम र वातावरणको विषयलाई मुख्य कार्यक्षेत्र बनाई इजिप्टबाट २०१५ देखि सुरु गरेको हो । यसको मुख्य उद्देश्य विश्वभरिका पर्यावरण, संस्कृतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क मार्फत सूचना प्रवाह गर्ने रहेको छ ।
‘मिस इको इन्टरनेशनल’को उपाधि नेपाल भित्रिने आसा सहित रायमाझीलाई प्रतियोगितामा पठाउन लागिएको ग्रिन आर्ट मिडियाका सिइयो प्रवीण लाकौलले बताए । ग्रिन आर्ट मिडियाकी अनिला श्रेष्ठ मिस इको नेपालको आधिकारिक राष्ट्रिय निर्देशकको रूपमा रहेकी छन् ।
धरान-१७ को श्री ज्वालामुखी विद .....
सुनसरीमा फेरियो सिडिओ, सुनसरीम .....
धरानका मेयर तिलक राईद्वारा अन् .....
राजनीतिमा हुने महिला हिंसा विर .....
किराँती सभ्यता र संस्कृतिसँग ज .....
उत्साहित बनेर लगाए ज्येष्ठ नाग .....
बिर्तामोडमा जिल्ला स्तरीय खुल् .....
गोधुली रनिङ कप फुटबल प्रतियोगि .....
धरान-१७ को श्री ज्वालामुखी विद्यालय ...
सुनसरीमा फेरियो सिडिओ, सुनसरीमा आए ...
धरानका मेयर तिलक राईद्वारा अन्तर्रा ...
राजनीतिमा हुने महिला हिंसा विरुद्ध ...
किराँती सभ्यता र संस्कृतिसँग जोडिएक ...
उत्साहित बनेर लगाए ज्येष्ठ नागरिकहर ...
बिर्तामोडमा जिल्ला स्तरीय खुल्ला ब् ...
गोधुली रनिङ कप फुटबल प्रतियोगितामा ...
इलाममा ट्याम्पो पल्टँदा १ जनाको मृत ...
सर्वोच्च अदालतको फैसला : एमाले र मा ...
बीपीको कोभिड अस्पतालमा धनकुटाकी कोर ...
मोरङको गोठगाउँमा सवारी दुर्घटना, २ ...
दोस्रो प्राथमिकताको पहिलो चरणको कोर ...
बिर्तामोडमा आजबाट खुल्ला ब्याडमिन्ट ...
दार्चुलामा जिप दुर्घटना, चालक सहित ...
धरान-१७ शान्ति टोलको नवनिर्मित पुलक ...
प्रदेश स्तरीय भेट्रान कपको उपाधि बि ...
धरानमा शवलाई समाधिस्थ गर्ने जातिहरू ...
नेवार एकता समाज धरानको ८ औ स्थापना ...
गोधुली रनिङ कप फुटबल प्रतियोगिताको ...
भोजपुरमा ट्र्याक्टरबाट लडेर एक जनाक ...
उर्लाबारीका प्रवीण बास्तोला मृत्यु ...
प्रदेश १ का १३ वर्ष मुनि उमेर समूहक ...
मोरङ र सुनसरीमा भएका सवारी दुर्घटना ...
उच्च अदालतको आदेश पछि बुढी खोलाको प ...
अन्तर पालिका स्तरीय भलिबल प्रतियोगि ...
धरान उपमहानगरको आठौँ नगर सभा सम्पन् ...
फोनिजको प्रदेश १ भेला सुनसरीको रास ...
धरानको चारकोशे झाडीमा सडेको अवस्थाम ...
अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसमा प्रदेश ...
धरान-५ मा रहेको खाजा एण्ड हुक्का हा ...
माओवादी द्वन्दकालको कथामा सुमेश श्र ...
'कोभिड-१९ बिरुद्धको खोप लगाउँदा ज्व ...
'ड्रेस टु इम्प्रेसन' को सिजन-३ आगाम ...
फागुन १० गते उद्घाटन भएर स्थगित भएक ...
Copyright © 2018 / 2021 - Kapurinews.com All rights reserved